Nin dhintay ayaa laga mamnuucay inuu ka qayb galo aaskiisa ka dib markii uu ku fadhiistay kursiga - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Nin dhintay ayaa laga mamnuucay inuu ka qeyb galo aaskiisa ka dib markii uu ku fariistay kursiga - SANTE PLUS MAG
Waa sheeko toos uga timaadda Kariibiyaanka. Maydka nin dhintay ayaa loo diiday inuu galo aaskiisa, mamnuuc taas oo umuuqata wax xoogaa macquul markii hore. Wargeyska Ingiriiska The Sun wuxuu inoo keenayaa faahfaahinta sheekadan aadka u layaabka badan.
Shaqaalaha kaniisadda ayaa u diiday Che Lewis inuu yimaado aaskiisa
Che Lewis wuxuu ahaa 29 jir la toogtay oo lala dilay aabihiis, Adlay Lewis, gurigooda. Waa masiibo dhab ah oo ku dhacda qoyskan nasiib darrose ma ahan tii ugu horreysay, maadaama Che walaalkii isna la dilay bishii Luulyo. Sidaa darteed aaska si dhakhso leh ayaa loo abaabulaa si qoysku u macsalaameeyaan isaga. Waa halkaan muuqaalada layaabka leh ee midba midka kale raaci lahaa. Isagoo ku labisan jaakad midabkeedu yahay casaan iyo surwaal cad, Che ayaa jirkiisa markii ugu horraysay la marsiiyey markii uu ku fadhiyey kursi. Ka dib waxaa loo qaaday kaniisadda oo sii mareysa caasimadda waddanka wuxuuna ku dhammaaday kaniisadda St John ee ku taal magaalada Diego Martin. Waa shaqaalaha kaniisadda, oo gebi ahaanba la yaabay xaaladda jidhka Che, yaa u diidaya inuu soo galo.
Meydka Che Lewis ayaa loo diiday helitaanka aaska u gaarka ah - Source @ denniesfuneralhome / Newsflash
Xubnaha qoyska xitaa ma aqoonsana qofka dhintay
Meydka Che ayaa markaa lagu dhejiyaa kaniisada horteeda halka uu aaska ka dhacayo. The Sun ayaa werisay in xubnaha qoyska qaarkood xitaa aysan taas ogaan ninka dhalinyarada ah ee hor fadhiya kaniisada runti wuxuu ahaa Che. Waxaa soo raacay muuqaallo la yaab leh oo la yaab leh halkaas oo, sida uu qabo wargayska Ingiriiska, qaar ka mid ah dadka meesha maraa ay xitaa canaanan lahaayeen Che maxaa yeelay ma uusan xijaab xidhnayn xilliyada masiibada. Aad ayey uga fogaayeen tuhunka in wiilka dhalinyarada ah ee hortooda fadhiya uu mar hore neefsaday. Dhammaan xafladda ayaa laga duubay oo laga sii daayay internetka.
Gabadhan 5 jirka ah waxay bannayneysaa bangigeeda doofaarka si ay u caawiso saaxiibkeed oo ...
Jilicsanaanta dabiiciga ah. Baro sida si toos ah timahaaga loogu toosiyo iyadoo ...
Tijaabinta foojignaanta: miyaad ka heli kartaa qaladka tan ...
Meydka Che Lewis oo fadhiya albaabka aaskiisa Source: @ denniesfuneralhome / Newsflash
Guriga aaska ayaa wax laga weydiiyay xaflada kadib
Kadib markay xafladu dhammaatay, dhowr qof ayaa u jeestay guriga aaska oo gacanta ku haya meydka Che si looga jawaabo. Tan dambe ayaa shaaca ka qaaday inay noqon doonto Qoyskii codsaday in maydka marxuumka sidan loogu maydho. Si kastaba ha noqotee, weydiinta lafteedu kuma cusba iyaga maxaa yeelay waa adeeg ay si furan ugu fidiyaan macaamiishooda. Sida haweeneydan oo qabrigeeda laga soo saaray 3 sano geerideeda ka dib, Cibaadooyinka qaarkood waxay umuuqdaan kuwa qariib ah oo ay ku dhaqmaan dhowr qowmiyadeed oo adduunka oo dhan ah.
Xaqiiqda ayaa wali ah in aysan ahayn waqti dheer ka hor bilaysku soo farageliyay kiiskan. Sarkaalka Brent Batson ayaa u sheegay warbaahinta maxaliga ah in marxuumka sidan oo kale loogu soo qaado waa dambi iyo taas baaritaanka ayaa la sameyn doonaa si loo baaro guriga aaska ee su'aashu ka taagan tahay.
Meydadka daran, isbeddel cusub
Waad la yaabi kartaa, laakiin kiiska Che waa mid ka fog midka kaliya, ama xitaa kan ugu xiisaha badan. Waa Insider taas oo soo sheegta dhowr kiis oo ku saabsan isbeddel cusub oo loo yaqaan 'meydka xad-dhaafka ah, halkaas oo meydka qof mayd ah lagu maydho meel aan dhaqan ahayn. Waxaan soo qaadan karnaa, tusaale ahaan, kiiska Renard Mathews, oo ah nin dhalinyaro ah oo 18 jir ah oo jirkiisa lagu duugay isagoo ciyaaraya ciyaaraha fiidiyowga. Haddii meydadkaas meydku ka argagaxaan wax ka badan hal, aaska aas-aasiga ah wuxuu ku sii ahaanayaa naftooda kaliya cibaadooyinka caawiya qoysaska si ay u aqbalaan dhimashada qof aad jeceshahay, wax aan marna sahlaneyn. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku saabsan geerida qof aad jeceshahay naftaada. Si kastaba ha noqotee, tani maahan fikradda dhammaan xirfadleyda, Dr Claudia Ruiz waxay bixisaa tarjumaad xoogaa ka duwan isbarbardhiga cibaadooyinkan xad-dhaafka ah qaab diidmo ah. Dr Luiz wuxuu qeexayaa, si kastaba ha noqotee, in tan loo baahan yahay in lagu falanqeeyo xaalad-kiis-kiis ah iyo iyadoo loo eegayo shucuurta kuwa ku lugta leh. Xaqiiqdu waxay tahay in cibaadada aaska ay sii socdaan oo ay isbeddelaan waqti ka dib. Waxa kale oo suurtagal ah in mustaqbalka, meydadka bani’aadamka lama aaso lamana gubo.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/un-homme-mort-est-interdit-dassister-a-ses-propres-funerailles-apres-etre-arrive-assis-sur-une-chaise /
aprèsyimaadofadhiyachaiseka soo qaybgalwaanoqonaaska
LFP: Pablo Longoria ayaa dhagaha ka jiiday OM - FOOT 01
Elite One: Eding Sport waxay leedahay tababaraheeda cusub. - Aan wada hadalno Kubadda Cagta 237
Gabadhan 5 jirka ah waxay bannayneysaa bangigeeda doofaarka si ay u caawiso saaxiibkeed oo waalidkeed ...
Jilicsanaanta dabiiciga ah. Baro sida tooska loogu toosiyo timahaaga 8dan tilmaamood ...
Tijaabinta foojignaanta: miyaad ka heli kartaa qaladka sawirkan? - CAAFIMAAD ...
Ilmo dhashay indho la'aan ayaa helay qoys kadib markii hooyadiis ka tagtay ...